Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चीनले चाख्दै छ जोगीभात – Emountain TV
काठमाडौं, २२ साउन । तीन जना नेपाली बालिकाको हात जोडेको फोटोमाथि ‘नमस्कार’ र मुनि ‘प्राकृतिक नेपाल’ लेखिएको ठूलो फ्लेक्स ढोकैमा राखिएको छ ।
दायाँ फन्को मारी भित्र पस्नासाथ अघिल्तिर सेलरोटी, मम, जोगीभात, सिकर्नी, खीर, आलु र तामाको तरकारी, साँधेको गुन्द्रुक, योमरीलगायत नेपाली खानेकुरा देखेपछि चिनियाँहरू छक्क पर्छन् । छक्क किनभने, खानाको परिकारमा धनी मानिने चीनमा उनीहरू नेपाली खानाको नयाँ स्वाद चाख्न खोज्दै छन् । राजधानी बेइजिङस्थित मिन्चु होटलको वातावरण नै नेपालमय छ, संगीतको मधुर धुन सुनिन्छ– ‘चरीमा ज्यानले गुँडैमा लायो लहरे बरैमा बरीलै’ ।
अबको केही दिन यही वातावरण उपलब्ध हुनेछ यो होटलमा ।
बुधबारदेखि सुरु १५ दिने नेपाली खाना महोत्सवको रौनक भिन्न छ । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र चीनको विदेशी मैत्री संस्थाहरूका लागि बेइजिङ संघले संयुक्त रूपमा नेपाली खाना महोत्सवको आयोजना गरेका हुन् । नेपाली खाना महोत्सवका लागि बेइजिङ आएका भान्से (कुक) हरू श्रीराम अधिकारी र सुरेशचन्द्र बस्नेत बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त रहन्छन् । अधिकारी नेपाली कुक एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुन् भने बस्नेत निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् ।
महोत्सव सुरु भएको पाँच दिन भइसकेको छ । खान आउने चिनियाँको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको अधिकारी बताउँछन् । विशेष गरी बेइजिङका सञ्चार माध्यमबाट महोत्सवको समाचार आएपछि नेपालप्रति रुचि राख्ने चिनियाँहरू सोधखोज गर्दै आउने गरेका छन् ।
बेइजिङको थिआन आनमन स्क्वायरदेखि साढे ३ किलोमिटर पश्चिमतिर दोस्रो चक्रपथभित्र पर्ने मिन्चु होटलमा ६ सय ५० कोठा छन् । उक्त होटलमा दैनिक सयौँ चिनियाँले खाना खान्छन् । होटलमा बस्ने पाहुना र बाहिरबाट खान जाने चिनियाँका लागि यति बेला नेपाली खीर र सिकर्नी लोकप्रिय बनेका छन् । छानेको दहीमा काजु, किसमिस, नरिवलका टुक्रा र दालचिनी अथवा सुकुमेलको धुलो मिसाएर बनाइएको सिकर्नी खाइसकेपछि सानो कचौरामा राखेर डेजर्टका रूपमा दिइन्छ ।
खीर र सिकर्नीबाहेक नेपाली खाना महोत्सवमा धेरै चिनियाँले रुचाएको अर्को परिकार हो— जोगीभात । चामलमा विभिन्न सागसब्जीसँगै काजु, किसमिस, नरिवल राखेर यो परिकार पकाइन्छ । त्यसमाथि केसर राखेर पहेँलो बनाइन्छ । जोगीले सिदा माग्दा एउटै पोकामा सबै कुरा हालेर बोक्ने र पछि पकाउँदा एक किसिमको खिचडी हुने भएकाले यस प्रकारको खानेकुरालाई ‘जोगीभात’ नामकरण गरिएको भान्से अधिकारीले जनाए । नेपालमा चाहिँ केसरको ठाउँमा बेसार हालिन्छ तर चिनियाँले बेसार मन नपराउने भएकाले केसर हालिएको उनले स्पष्ट पारे । चिनियाँहरू भात कम खाने गर्छन् । ‘यो होटलमा दैनिक तीन किलो चामलको भात पाक्दो रहेछ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले जोगीभात पकाउन थालेपछि दैनिक १० किलो चामल पाक्न थालेको छ ।’
चिनियाँले मसलेदार खानेकुरा रुचाउँदैनन् । चीनमा च्यांग्रा र भेडाको मासुमा मात्र जिरा हालिन्छ । अधिकांश नेपाली खानेकुरामा जिरा र बेसार हालेको देखेपछि चिनियाँहरू तर्सिएका थिए । त्यसपछि जिरा र बेसार हालेका खानेकुरा पकाउन छोडेको अर्का भान्से बस्नेतले बताए । ‘चिनियाँहरूलाई जिराको बासना र बेसार मन पर्दो रहेनछ,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक हामीले त्यस्तो खानेकुरा पकाउँदा अनुहार र शारीरिक हाउभाउले जिरिंग गर्दै तर्सिएका थिए । पछि अंग्रेजी जान्ने कुकले यस्तो त चिनियाँले खाँदैनन् भनेपछि हामीले जिरा र बेसार हाल्न छोडयौँ ।’
महोत्सवमा हरेक दिन दिउँसो र बेलुकाको खानामा नेपाली परिकारहरू राखिन्छन् । शुक्रबार साँझचाहिँ सांगीतिक प्रस्तुतिसँगै प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली खानेकुरा पकाएको देखाइन्छ । गत शुक्रबार साँझ अधिकारी र बस्नेतले ‘फापर रोल’ बनाएर प्रदर्शनी गरे । फापरको पिठोमा अन्डा, सागसब्जी र च्याउ राखेर पेनकेक बनाउने र त्यसलाई रोल गरिने भएकाले यसको नाम फापर रोल रहेको बस्नेतले बताए ।
पाँचतारे मिन्चु होटलले नेपाली खाना महोत्सवभरि विशेष छुटमा खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । अगस्ट १ देखि १५ सम्म लन्च तथा डिनरको मूल्य १५८ चिनियाँ युआन (करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । अन्य समयमा होटलको मिनुमा लन्च तथा डिनरको मूल्य यसको दोब्बरभन्दा बढी हुने गर्छ । महोत्सवमा खाना खाएर निस्किएकी चु मे नामकी चिनियाँ महिलाले नेपाली खाना निकै मीठो भएको बताइन् । ‘नेपाली खाना महोत्सव भनेपछि निकै धेरै नेपाली खाना होला भन्ने सोचेकी थिएँ,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘तर त्यति धेरै परिकार रहेनछन् । मलाई नेपाली खाना निकै मीठो लाग्यो ।’
चिनियाँ परिकार सयौँ प्रकारका हुने गर्छन् । एउटा पाँचतारे होटलमा सामान्य लन्च र डिनरमै दर्जनौँ खानेकुरा राखिएका हुन्छन् । खानेकुरामा समृद्ध चिनियाँले नेपाली खाना महोत्सवमा पनि यस्तै धेरै प्रकारका खानेकुरा होलान् भन्ने सोच्नु अस्वाभाविक होइन । तथापि मिन्चु होटलमा राखिएका दाल, भात, तरकारी, फापरको रोटी, हाँसको छोइला, चुकाउनी, सिकर्नी, खीर, क्वाँटी, गुन्द्रुक, आलु र काउलीको तरकारी आदिले थुप्रै चिनियाँको मन जितेका छन् । यसले नेपालको संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धनमा केही इँटा थप्ने आशा गरेको नेपाली दूतावासका काउन्सिलर हरिश्चन्द्र घिमिरे बताउँछन् । कान्तिपुरबाट